ရေမလိုတဲ့ Onsen တွင်အပန်းဖြေနိုင်ပြီ !!! (ဂျပန်တို့၏ပြောင်းလဲနေသောတီထွင်မှု)
ဂါ 26 Jan 2021, 13:40 ညနေ
နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်အတွင်း သွားလည်ပတ်နိုင်မယ့် ဝါးမီးလုံးလေးတွေနဲ့ Kurokawa Onsen
ဆောင်းဦးတွင် လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု !!
လက်ထပ်ပြီးစအမျိုးသားကို နှင်းထဲပစ်ချတဲ့ရိုးရာ “ むこ投げすみ塗り”
ရေချိုးကန်တွေထဲ ဝင်ရောက်တဲ့ နည်းလမ်းအမှန်
Oita စီရင်စုရှိ Oyama ဆည်ကြီးကိုမော်ကြည့်နေတဲ့ ‘Attack on Titan’ manga ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ရုပ်တုများ
ရေပူစမ်းကို Delivery နဲ့အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပြီ !!!
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ Nanbu Tekki ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း !!!!
ကီမိုနိုရဲ့ အင်္ကျီလက်က ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြတဲ့အခါသုံးတယ် !?
အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဇနီးက နောက်ထပ်ဇနီး ၆ ယောက်ကိုကျိန်ဆဲသတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဇာတ်လမ်း..
Corona ကြောင့် Yakuza လည်းဝင်ငွေမရှိ !??
အိမ်မှာနေရင်း စက္ကူနဲ့လက်မှုပညာလုပ်ကြည့်ရအောင် !!!!
အရသာရှိမယ့်ပုံပေါ်လို့ဆိုပြီး ပြင်သစ်သူလေးကို သတ်စားလိုက်သူ
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ဓါးစာခံလုပ်တဲ့ Murder–suicide !!!!
ဂျပန်လူမျိုးအတွက် Mask တွေအခမဲ့ပေးနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတစ်စု!!!